07/03/2018 - Page 3 sur 4 -
Fanabeazana : Niova ny tontolo iainan’ireo mpianatry ny EPP Amboditsiry
Mankalaza ny faha-55 taonany. Niova ny tontolo iainan’ireo mpianatry ny EPP Amboditsiry. Notokanana omaly ny fanavaozana ny toeram-pianarana hanovozan’ireo mpianatra 655 fahalalana. Fanavaozana izay vokatry ny fiaraha-miasan’ny fanjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenana sy ny sehatra …Tohiny
Analakely, Soarano, Tsaralalàna, : Miandahy miambavy ny harom-paosy
Efa miandahy miambavy ny resaka harom-paosy raha ny eny amin’ny faritra Analakely sy ny manodidina no asian-teny. Nahazoana tatitra tamin’izany mantsy fa vehivavy roa no voasambotra nandritry fisafoana natao teny amin’ny manodidina ny Soarano iny, …Tohiny
«Midona amin’ny rindrina!»
Mety samy manam-paniriana iala eto Madagasikara amin’ity tabataba sy korontana ary tebiteby lava ity daholo angamba raha ny marina saingy… Voatery miteny izany manoloana ireto teratany Malagasy mbola mikiry mandeha any Liban, Kuweit sy ny …Tohiny
Hopitaly Befelatanana : Nahazo toerana fitsaboana sy famelomana aina ho an’ny zaza
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy omaly ny toerana fitsaboana sy famelomana aina ho an’ny zaza tena raitra, teny amin’ny hopitaly Befelatanana. Tonga nitokana izany ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, notronin’ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier …Tohiny